Ajụjụ - AOOD Technology Limited
Kedu ihe dị iche na mgbanaka mmịfe na ndị otu rotary?
A na -eji mgbanaka mgbapụ abụọ na ndị otu rotary na -ebufe mgbasa ozi site na akụkụ rotary gaa n'akụkụ kwụ ọtọ mgbe ọ na -atụgharị. Mana mgbasa ozi nke mgbanaka mgbapụ bụ ike, akara na data, mgbasa ozi ndị otu rotary bụ mmiri mmiri na gas.
Kedu maka akwụkwọ ikike nke ngwaahịa AOOD na -agbagharị ọkụ?
AOOD nwere akwụkwọ ikike maka otu afọ maka ngwaahịa eletriki niile na -agbagharị ma e wezụga mgbanaka mgbanaka omenala. Ọ bụrụ na ngalaba ọ bụla anaghị arụ ọrụ nke ọma n'okpuru ọnọdụ ọrụ nkịtị, AOOD ga -edowe ma ọ bụ dochie ya n'efu.
Kedu otu esi ahọrọ ụdị mgbanaka mgbanaka kwesịrị ekwesị maka ngwa m?
Ọnụ ọgụgụ sekit, ugbu a na voltaji, rpm, oke nha ga -ekpebi ụdị nke mgbanaka mgbanaka AOOD chọrọ. Na mgbakwunye, anyị ga -atụle ngwa gị n'ezie (ịma jijiji, oge ọrụ na -aga n'ihu na ụdị akara) wee meere gị ezigbo azịza.
Kedu ihe kpatara m ga -eji họrọ AOOD TECHNOLOGY LIMITED dị ka onye ibe anyị yiri mgbaaka? Kedu uru gị?
Ebumnuche nke AOOD bụ imeju ndị ahịa. Site na nhazi mbụ, nhọrọ ihe, mmepụta, nnwale, ngwugwu na nnyefe ikpeazụ. Anyị na -enye ọrụ kacha mma mgbe niile ma gbaa mbọ hụ na ndị ahịa anyị nwere ike nweta ngwaahịa kacha mma na obere oge.
Kedụ ka AOOD ga -esi gbochie mgbanaka mgbanaka site na nnyonye anya?
Ndị injinia AOOD ga -egbochi nnyonye anya site n'akụkụ dị n'okpuru: a. Dịkwuo ebe mgbanaka mgbaama na mgbaaka ike ndị ọzọ site na mgbanaka mgbanaka. b. Jiri eriri echekwara pụrụ iche nyefee akara. c. Ihe Tinye ọta n'èzí maka mgbaaka mgbaama.
Kedu oge nnyefe AOOD ozugbo enyere iwu?
Anyị nwere ọnụ ọgụgụ ezi uche dị na ya maka ọtụtụ mgbaaka mgbakwụnye ọkọlọtọ, yabụ oge nnyefe na -abụkarị n'ime otu izu. Maka mgbaaka ọhụrụ, anyị nwere ike were izu 2-4.
Kedu otu m ga -esi jiri mgbụka wụda mgbanaka mkpọchi?
Ọ na -abụkarị anyị na -ebuli ya site na oghere nrụnye na setịpụrụ ịghasa, anyị nwere ike tinye flange ka ọ dabara na nrụnye gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Maka sistemụ antenna satịlaịtị dijitalụ mmiri nwere ọnụọgụ abụọ nke 2-axis, ị nwere ike ịkwado ụfọdụ azịza mgbanaka mgbanaka kwesịrị ekwesị?
AOOD enyela ọtụtụ ụdị mgbaaka mgbaaka maka sistemụ antenna, gụnyere sistemụ antenna mmiri na sistemụ antenna okporo ụzọ. A na -achọ ụfọdụ n'ime ha ka ha nyefee mgbaàmà ugboro ugboro dị elu yana ụfọdụ n'ime ha chọrọ ogo nchekwa dị elu, dịka ọmụmaatụ IP68. Anyị niile emela ya. Biko kpọtụrụ AOOD maka nkọwa mgbaaka mgbakwụnye gị.
Site na mmụba nke teknụzụ ọhụrụ, a chọrọ mgbanaka mmịfe dị elu karịa iji nyefee akara pụrụ iche. Kedu akara nke enwere ike ibugharị site na mgbanaka mkpọda AOOD?
Site na ahụmịhe R&D na afọ na imekọ ihe ọnụ, ebufela mgbanaka AOOD simulation vidiyo vidiyo, akara vidiyo dijitalụ, ugboro ugboro, njikwa PLD, RS422, RS485, Inter Bus, CanBus, Profibus, Net Ngwa, Giga Ethernet na ndị ọzọ.
Ana m achọ mgbanaka mgbanaka iji nyefee 1080P na ụfọdụ ọwa mgbaàmà ndị ọzọ na obere ihe owuwu. Ị nwere ike ịnye ihe yiri ya?
AOOD ewepụtala mgbanaka mmịfe HD maka igwefoto IP na igwefoto HD nke nwere ike nyefee ma HD akara na akara nkịtị na kọmpat kọlụm mgbanaka.
Ị nwere ihe nwere ike ibufe 2000A ma ọ bụ karịa ugbu a?
Ee, anyị nwere. AOOD njikọ njikọ eletriki na-eji naanị nyefee agba agba: #f0f0f0; akwa dị ugbu a.
Ọ bụrụ na mgbanaka mkpuchi chọrọ ogo nchekwa dị elu, dịka IP66. Mkpọrọ ọ ga -adị nnukwu?
Site na teknụzụ dị elu na ọgwụgwọ pụrụ iche, AOOD nwere ike mee mgbanaka mmịfe ọ bụghị naanị IP66 kamakwa ọmarịcha obere iyi. Ọbụlagodi mgbanaka mgbanaka buru ibu, anyị na -enyere ya aka ịrụ ọrụ nke ọma yana oke nchekwa.
Maka oru ngo ROV, anyị chọrọ njikọta abụọ nke na -agbanwe agbanwe nke nwere ike ibunye mgbaàmà otu eriri na ike n'okpuru oké osimiri. Ị nwere ike ịnye ụdị ihe ahụ?
AOOD nwere ihe ịga nke ọma ịnye ọtụtụ nkwonkwo rotary maka ROV na ngwa mmiri ndị ọzọ. Maka gburugburu mmiri, anyị na -ejikọ njikọta eriri fiber optic rotary n'ime mgbanaka elektrik, iji nyefee eriri eriri, ike, data na mgbaama n'otu ọgbakọ zuru oke. Tụkwasị na nke a, anyị na -eburu n'uche ọnọdụ ojiji, a ga -eji igwe anaghị agba nchara rụọ ụlọ nke mgbanaka slip, a ga -anabatakwa ụgwọ nrụgide na klaasị nchebe IP68.
Ndewo, ndị otu anyị na -echepụta atụmatụ robotic, anyị chọrọ ụfọdụ njikọgharị robotic iji dozie nsogbu eriri, mee ka m mara ihe ị ga -emere ya.
Na ngwa robotic, a na -akpọ mgbanaka rọba dị ka njikọta robotic ma ọ bụ mgbanaka mgbanaka robot. A na -eji ya ebunye mgbama na ike site na ntọala ruo na ngalaba njikwa ogwe aka robotic. O nwere akụkụ abụọ: a na -etinye otu akụkụ kwụ ọtọ na ogwe aka robot, otu akụkụ na -atụgharị na -agbago na nkwojiaka robot. Site na njikọta robotic, robot nwere ike nweta ntụgharị 360 na -enweghị njedebe na enweghị nsogbu eriri. Dị ka nkọwapụta nke robots si dị, njikọta robotic na -agbasa n'ọtụtụ ebe. Ọtụtụ mgbe, robot zuru ezu ga -achọ ọtụtụ mgbanaka mgbanaka robot na mgbanaka mgbapụ ndị a nwere ike dị iche iche. Ruo ugbu a, anyị enyelarị mgbaaka mgbakwụnye kọmpat, site na mgbaaka na-amị amị, mgbaaka pan pan achịcha, njikọta rotary fiber optic, nkwonkwo rotary electro-optic na usoro rotary omenala maka robotik.
Ngwọta mgbanaka mgbapụ gị dị mma, mana kedu ule ị ga -eme? Kedu ka ị si akpa agwa?
Maka mgbakọ mgbanaka mgbanaka nkịtị, dị ka AOOD obere mgbanaka mgbanaka, anyị ga -anwale voltaji na -arụ ọrụ na nke ugbu a, akara, torque, mkpọtụ eletriki, nguzogide mkpuchi, ike dielectric, akụkụ, ihe na ọdịdị. Maka ọkọlọtọ ndị agha ma ọ bụ ihe mgbapụta mkpa pụrụ iche ọzọ dị elu, dị ka oke ọsọ na nke a ga-eji n'ụgbọ ala mmiri, nchekwa & ndị agha na mgbanaka mgbanaka igwe, anyị ga-eduzi ujo igwe, ịgba ịnyịnya ọkụ, oke okpomọkụ, obere okpomọkụ, ịma jijiji, iru mmiri, nnyonye anya mgbaama, ule ọsọ ọsọ na ihe ndị ọzọ. Nnwale ndị a ga -adị n'usoro ọkọlọtọ ndị agha US ma ọ bụ ọnọdụ nnwale akọwapụtara nke ndị ahịa.
Kedu ihe mmịfe HD-SDI ị nwere? Anyị chọrọ ọtụtụ n'ime ha.
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere mgbaaka mgbapụta 12way, 18way, 24way na 30way SDI. Ejiri ha kọmpat ma dị mfe ịwụnye. Ha na -ahụ maka ịnyefe akara ngosi dị mma nke vidiyo nkọwa dị elu ma nwee ike mezuo ihe achọrọ na ngwa TV na ihe nkiri.